Tahiti Tourisme manendry CEO vaovao
Home » Vaovao momba ny fizahantany » Tahiti Tourisme manendry CEO vaovao
Tamin'ny fivorian'ny Tahiti Tourisme Board of Directors natao ny 13 Janoary 2020, tapaka ny fanendrena an'i Jean-Marc Mocellin ho Lehiben'ny mpanatanteraka (CEO) an'ny Destination Marketing Organisation (DMO) ho an'ny Ny Nosy Tahiti. Ny natolotra azy dia natolotr'i Maïlee Faugerat, filoha lefitry ny filankevi-pitantanan'ny Tahiti Tourisme, ary ny minisitry ny fizahantany, Nicole Bouteau.
Taorian'ny fialan'ny CEO taloha, Paul Sloan tamin'ny volana oktobra tamin'ny taon-dasa, nisy antso ho an'ny eo an-toerana sy iraisam-pirenena ho an'ny fangatahana natombok'i Tahiti Tourisme.
Tao anatin'ireo fangatahana marobe narotsaka, ny masoivoho mpikarama an'habakabaka Michael Page nokaramain'ny DMO, mpangataka 6 efa voafantina izay nitafatafa tamin'ny Minisitra sy ny Lehiben'ny Filankevi-pitantanan'ny Tahiti Tourisme tamin'ny faran'ny taona lasa.
Taorian'ireny dinidinika ireny dia notazonina ny fangatahan'Andriamatoa Jean-Marc Mocellin ary natolotra ny mpikambana amin'ny birao ao amin'ny Tahiti Tourisme. Malaza any Polinezia frantsay sy ao amin'ny indostrian'ny fizahan-tany eo an-toerana izy, ary izy no CEO ho an'ny Nouvelle Calédonie Tourisme, ny DMO ho an'i New Caledonia.
Teraka tany Nouvelle-Calédonie, Jean-Marc Mocellin dia lasa rehefa avy nahazo diplaoma tamin'ny sekoly ambaratonga faharoa mba hanohy ny fianarany tao amin'ny Hotel Management and Tourism School of Nice izay nahazoany diplaoma tamin'ny mari-pahaizana "BTS" (hany diplaomam-pirenena avo kokoa misy amin'izany. fotoana) amin'ny fanolorana ny memoara momba ny "Fampandrosoana maharitra ny fizahan-tany mandritra ny fanajana ny tontolo iainana."
Nanohy ny asany tamin'ny sehatry ny trano fandraisam-bahiny marika iraisam-pirenena izy izay nitondra azy tany London voalohany izay nanakaramana azy mahitsy taorian'ny fianarany nataon'ny Sheraton Group. Nampiofana nandritra ny 2 taona dia nalefa tany Afrika, Benin, Nizeria, Gabon ary Egypt izay manampahaizana manokana amin'ny fanokafana trano fandraisam-bahiny, raha miakatra amin'ny tohatra iray mankany amin'ny manaraka izy.
Taorian'ny 6 taona tany Afrika dia niditra tao amin'ny faritry ny hotely Shangri-la izy izay, taorian'ny fampiofanana nohatsaraina tao Pulau Pinang-Malaysia, dia nandefa azy tany Fiji nandritra ny 4 taona mba hitantanana ny fiasan'ny toeram-pialofana lehibe indrindra tamin'izany fotoana izany, ny Shangri-la's Fijian Resort (efitrano fandraisam-bahiny 436 / mpiasa 650) ary avy eo ny fitantanana ankapobeny ny Shangri-la Mocambo any Nadi.
Tonga tany Tahiti izy avy eo ary nanjary liana tamin'ny Polynesia izy nandritra ny 23 taona raha nandray ny fitantanana ilay Beachcomber malaza izay nohavaoziny, nitariny ary navadiny ho Intercontinental Resort Tahiti.
Ny filàna fanamby vaovao sy ny fiantsoana traikefa matihanina any Azia dia nahatonga azy handao an'i Tahiti mba hitarika ny Hua Hin intercontinental Hua Thailand mandritra ny 2 taona.
Ny faran'ny 2016, ny fotoana hitarihanao ny Nouvelle-Calédonie Tourisme ao amin'ny nosy niaviany raha mbola nitatra ny sehatry ny fizahan-tany eo an-toerana dia nanery azy hanaiky ny tolo-kevitry ny governemanta Caledonianina. Nandray anjara tamin'ny varotra ho any amin'ny maha CEO ny Nouvelle-Calédonie Tourisme izy, izay nivelarany fahaiza-manao vaovao nandritra ny 3 taona ary nandray anjara mavitrika tamin'ny famelabelarana ny paikadim-pandrosoana turismo any New Caledonia.
“Polinezianina tsianjery, fantatr'i Jean-Marc Mocellin ny toerana halehany, ireo Nosy Tahiti, ary koa ny tsena anatiny. Liana amin'ny kolontsaina polineziana izy ary tena mora tohina amin'ny fizahan-tany maharitra. Noho izany dia feno fahafaham-po ny fandraisanay ny fanendrena azy, ”hoy i Nicole Bouteau, minisitry ny fizahan-tany. "Ny fahalalany ny Nosy Nosy Tahiti sy ny zavatra niainany tany Azia sy ny faritra dia tena ilaina amin'ny toerana haleha."
Andriamatoa Mocellin dia handray ny toerany amin'ny fiandohan'ny volana aprily. Mandra-pahatongan'izany, ny fitantanana ankapobeny vonjimaika an'ny Tahiti Tourisme i Vaima Deniel, ny Lehiben'ny mpiasan'ny asa eo an-toerana.
Ny Operatoran'ny Hotely dia mivoaka manerana an'i Indonezia sy Malezia
Ny marary na ny maratra dia mijanona ho ahiahin'ireo mpizahatany mitsangantsangana